Umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu: izici nezinto ezithokozisayo | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 16/06/2022 11:05 | Isimo sezulu
Kokubili osukwini lwethu nosuku nasemithonjeni yezindaba ehlukene, sikhuluma ngesimo sezulu nesimo sezulu. Abantu abaningi bayayidida le miqondo futhi abazi kahle ukuthi iyini umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu.
Ngenxa yalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukukutshela ukuthi yimiphi umehluko omkhulu phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu esikhona kanye nezici zomunye nomunye wabo.
1 Umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu
2 Izimo zezulu
3 Izinto eziphawula umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu
4 siyini isimo sezulu
5 Amathuluzi e-Meteorological okulinganisa isimo sezulu
6 ukushintshashintsha kwesimo sezulu
Nakuba imiqondo yabo isondelene, amagama athi isimo sezulu nesimo sezulu awakwazi ukusetshenziswa ngendlela efanayo. Kunomehluko obalulekile ozihlukanisayo futhi uzihlukanise: ama-horizons wesikhathi.
Uma sikhuluma ngesimo sezulu, sibhekisela ezimweni zomoya ezifana nezinga lokushisa, umswakama noma ingcindezi endaweni ethile kanye nesikhathi esifushane uma kuqhathaniswa. Okusho ukuthi, uma sibona izibikezelo zezulu, zikhuluma ngesimo sezulu, hhayi isimo sezulu.
Isimo sezulu, ngakolunye uhlangothi, ibhekisela kuwo wonke lawa manani afanayo omkhathi, kodwa kulinganiswa isikhathi eside endaweni eyodwa. Yingakho, uma kuziwa ekushintsheni kwesimo sezulu, isibonelo, kucabangela amarekhodi kanye nedatha eqoqwe phakathi neminyaka.
Njengoba sishilo, singachaza isimo sezulu njengezibalo zesimo sezulu zesikhathi eside, ngokuvamile iminyaka engu-30. Ukuze silinganise isimo sezulu, kudingeka sibheke izinguquko ezakhini zaso, esizibhala ngezansi. Isimo sezulu sendawo ethile sinqunywa izingxenye zayo ezinhlanu. Izingxenye zesimo sezulu yilezi:
Isimo sezulu siphinde sithonywe izici ezihlukahlukene zaso, njengokuma kwendawo noma uhlaza.
Kunezici ezinhlanu ezakha isimo sezulu:
Izinga lokushisa lomoya: Njengoba igama lisho, indlela oshisa ngayo noma obanda ngayo umoya ngesikhathi esithile nangesikhathi esithile. Lokhu kuthonywa ikakhulukazi imisebe yelanga, okuzokwenza kube phezulu noma phansi kuye ngeplanethi nendawo. Izinga lokushisa lomoya kanye nemvula yizici ezimbili ezibalulekile zesimo sezulu.
Imvula: Kufaka noma yiluphi uhlobo lwamanzi avela emafwini emkhathini awela phezu komhlaba. Imvula, iqhwa, nesichotho kuyizinhlobo zemvula.
Ingcindezi yasemkhathini: Kuyisisindo esikhishwa ubuningi bomoya kuzo zonke izinhlangothi. Ukuphakama kokuphakama, lesi sisindo sizoba sincane ngoba kunomoya omncane ngaphezu kwethu. Izinga lokushisa libuye libangele ukuba umoya unwebe futhi ulahlekelwe ukuminyana, njengoba nje nokuphakama kwezinga lokushisa, izinga lokushisa liphakeme, ukucindezela kwehle.
Umoya: Ukunyakaza komoya emkhathini.
Umswakama: Ekugcineni, esinye sezici zesimo sezulu umswakama womkhathi, okuyinani lamanzi asemoyeni asesimweni somhwamuko.
Ukuhwamuka kwamanzi: Inqubo engokoqobo amanzi ashintsha ngayo esuka oketshezini abe igesi.
Ikhava Yefu: Imayelana namafu kanye nomthamo wala mafu emkhathini.
Izinto eziphawula umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu
Kunezici zezulu eziyisi-6 eziyinhloko:
Ububanzi: ibanga eliyi-angular phakathi kwephoyinti elinikeziwe kanye nenkabazwe yoMhlaba. Lokhu kuthinta i-angle yesigameko semisebe yelanga, ethinta ukushuba kokushisa endaweni kanye nobude bemini nobusuku.
Ukuphakama: yibanga elima mpo phakathi kwephoyinti elithile nezinga lolwandle. Lokhu kunomthelela omkhulu esimweni sezulu, njengoba ukuphakama okuphezulu njalo kusho amazinga okushisa aphansi kanye nezingcindezi eziphansi. Iphansi elishisayo linikezwa ukuphakama.
Ibanga ukusuka olwandle: Lokhu kubalulekile ngenxa yethonya lamanzi amakhulu namandla abo okugcina ukushisa isikhathi eside kunezindawo zezwekazi. Izifunda ezikude nolwandle zinama-amplitude ashisayo aphezulu ngenxa yokuthi azinawo umphumela wokushelela wolwandle.
I-Ocean Currents: Zithwala amanzi amaningi ezindaweni ezifudumele kakhulu, ngakho-ke zisebenza njengamapayipi noma izingxenye ze-radiator noma isiqandisi.
I-Topographic Orientation: Maka ukuthi indawo inelanga noma inomthunzi nokuthi iyithola kangakanani imisebe yelanga.
Isiqondiso semimoya yeplanethi nemimoya yesizini: Uma sikhuluma ngezimo zezulu, sikhuluma ngomoya, onomsebenzi ofanayo nemisinga yasolwandle, ohambisa umoya omningi, onamazinga okushisa ahlukene neziphepho noma amanye amathonya.
siyini isimo sezulu
Isimo sezulu sisho isimo sazo zonke lezi zici zomkhathi endaweni nesikhathi esinikeziwe. Sizobona uma sibala ukuthi lizokuna kusasa noma libalele noma belibanda kakhulu ngesonto eledlule. Yilokho esikubonayo ezibikezelweni zezulu noma ezibikezelweni zesimo sezulu.
Isikhathi sifundwe ngokujulile kusukela kudala, ngokunembile ngenxa yokuthi lapho sisazi kangcono, yilapho sisazi ngokunembe ngokwengeziwe isimo sezulu, ngakho-ke, kuba namathuluzi amaningi esinawo wokusibikezela. Ukukwazi ukubikezela isimo sezulu bekulokhu kubaluleke kakhulu kubantu. Kusukela esicelweni sakho sezolimo esiyisisekelo, kuya ekulungiseni uhlelo, uhambo noma umcimbi.
Amathuluzi e-Meteorological okulinganisa isimo sezulu
Ukuze siqedele ukuqonda kwethu umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu, sidinga nje ukusho okwengeziwe mayelana nalokhu kwakamuva. Kubalulekile futhi ukwazi ngamathuluzi esimo sezulu akala isikhathi futhi enze izibikezelo zesimo sezulu noma zesimo sezulu:
I-thermometer: Ivumela ukukala izinga lokushisa lomoya wendawo ngesikhathi esithile. Yile ndlela izinga lokushisa eliphezulu, elimaphakathi nelincane lendawo elaziwa ngayo.
I-Barometer: Linganisa umfutho womkhathi.
I-Anemometer: Linganisa isivinini somoya.
I-Pluviometer: Ikala imvula, isichotho kanye neqhwa.
I-Vane: Kusisiza ukuba sazi lapho umoya oya khona.
ukushintshashintsha kwesimo sezulu
Isimo sezulu nesimo sezulu amagama asetshenziswa ngokushintshana ukuxhumana nesimo samanje noma samanje somkhathi ngesilinganiso samahora kuya ezinsukwini. Njengoba kushiwo ngenhla, kuyilapho (isimo sezulu) sibhekisela esimweni samanje somkhathi, Isimo sezulu sisho izinguquko phakathi neminyaka engamashumi amathathu noma ngaphezulu.
Ukuguquguquka kwesimo sezulu kubhekisela ekushintsheni kwesimo sezulu kanye nezinye izibalo kuzo zonke izikali zesikhashana nezendawo, ngale kwezehlakalo zesimo sezulu ngasinye, ezenzeka ngezikhathi ezihlukene zesikali sezulu.
Ngethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nomehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu
Izintaba-mlilo eziyingozi kakhulu emhlabeni